Shiinaha oo caawin doona Soomaaliya - BBC Somali
Image caption Wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo dhiggiisa dalka Shiinaha
Dalka Shiinaha waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shir ay lahaayeen dalalka ku jira ururka Jaamacadda Carabta iyo dalka Shiinaha oo martigelinayay, shirka ayaa waxaa looga hadlayay xiriirka labada dhinac ee xagga dhaqaalaha, siyaasadda iyo ammaanka.
Soomaaliya oo ka mid ah ururukaasi waxaa uga qaybgalay shirka wasiirka arrimaha dibedda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle.
Wasiirka oo wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya siiyay BBC Somali ayaa sheegay in Shiinuhu uu ka oggolaaday in Soomaaliya inuu ka qaybqaato dib u dhiska Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca jidadka iyo dekedaha.
Cabdiraxmaan Beyle waxa kale oo uu ka hadlay arrimaha qaxootiga Soomaalida ee dalka Kenya iyo weliba ku dalalka Carabta.
Waxa uu sheegay in dowladda Kenya ay bishan June 15-keeda ka wada hadli doonaan arrinta qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dalka Kenya.
Waxaa kale oo uu ka hadlay arrimo kale. Weriyaha BBC Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa telefonka magaalada Beijing ku wareystay.